လေးမျိုးပေါင်း 100 ကျပ်နဲ့ မနက်ဖြန် Mazely Flannel မှာရောင်းချပေးမည်…. – Sport Gaber
လေးမျိုးပေါင်း 100 ကျပ်နဲ့ မနက်ဖြန် Mazely Flannel မှာရောင်းချပေးမည်….
၄ မျိုးကိုမှ ၁၀၀ ကျပ်ပါ။ ဆန်တပြည်၊ ဆီငါးဆယ်သား၊ ကြက်ဥဆယ်လုံး၊ ကြက်သွန်ငါးဆယ်သား လေးမျိုးပေါင်း 100 ကျပ်နဲ့
မနက်ဖြန် Mazely Flannel မှာရောင်းပေးမယ်
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ Mobile Service ဆရာများမှ ဦးဆောင် ပြီး ရန်ကုန်တိုင်း မြို့နယ်ငါးမြို့နယ် ( လှိုင်၊ လှိုင်သာယာ၊ ရွှေပြည်သာ၊တောင်ဒဂုံ၊ သာကေတ၊ ဒလ ) တို့ တွင် စားဝတ်နေရေး အခက်ခဲ ဖြစ်နေသူများအတွက် တဦးလျှင် ဆန်တပြည်၊ ဆီငါးဆယ်သား၊ ကြက်ဥဆယ်လုံး၊ ကြက်သွန်ငါးဆယ်သား စီ လေးမျိုးပေါင်း 100 ကျပ်ဖြင့် ရောင်းချပေးသွားမည် ဖြစ်ပါတယ်။
1/8/2020 ရက်နေ့ ညနေ လေးနာရီ အချိန်တွင် အယောက် (300) အတွက် လှိုင်မြို့နယ် Mazely Flannel ဘူတာရုံလမ်းမှတ်တိုင်အနီး အင်းစိန်လမ်းမတွင် စတင်ရောင်းချပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး၊ ကျန်မြို့နယ်များတွင်လဲ နောက်ရက်များတွင် ဆက်လက်ရောင်းချ ပေးသွားပါမည်။
Mobile Service ဆရာများနှင့်အတူ Myanmar Mobile Service Association (MMSA) အသင်းဖြစ်မြောက်ရေး ကော်မတီဝင်များ၊ စေတနာ
အလှူရှင်များနှင့် Mazely Flannel မှလဲ လိုအပ်သည်များကို ကူညီပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။
တဦးနှင့်တဦးတဦးနှင့်တဦး ထိတွေ့မှု မရှိစေရန် ၆ပေခွာ တန်းစီ ပေးပါရန် နှင့် ငွေစက္ကူများကို ကိုယ်တိုင်ခြင်းထဲထည့်ပြီး ကိုယ်တိုင်ပစ္စည်းယူ ခြင်းဖြင့်ကာကွယ်ကြပါ။တန်းစီရာတွင် အဆင်မပြေသူများကို ဦးစားပေးခြင်းဖြင့် ပြည်သူ အချင်းချင်း ကူညီကြပါ။
1 ရက် 8 လ (မနက်ဖြန်) ညနေ 4:00 မှ စတင်၍ ဝယ်ယူနိုင်ပါပြီ။ လူစု လူဝေး မဖြစ်စေရန်အတွက် မကုန်မချင်း ထိုင်ရောင်းပေး မှာ ဖြစ်လို့ ဖြည်းဖြည်း လာခဲ့လို့ရပါတယ်။
အမှတ် (21) ၊ အင်းစိန်လမ်းမကြီး၊ ဘူတာရုံလမ်း မှတ်တိုင်အနီး၊ (9) ရပ်ကွက် ၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်။
ကမ္ဘာ့ငတ်မွတ်မှု အဆိုးဆုံးကြုံနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတွေထဲ မြန်မာကိုစတင်ထည့်သွင်း
အောင်လအန်ဆန်ကို ဒဲ့စိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ ဖိုက်တာ တစ်ဦး ထပ်မံထွက်ပေါ်လာ